Ndokuona kumusoro uko, naPierre Lemaitre, pa cinema. Ongororo yangu. | Zvazvino Zvinyorwa
Ndokuona kumusoro uko, naPierre Lemaitre, pa cinema. Ongororo yangu.
Ndiri kuona mazuva mashoma apfuura kuti nhasi anovhura iro bhaisikopo de Ndokuona kumusoro uko, inoverengeka ya Pierre Lemaitre, akahwina Goncourt 2013. Uye ndinofara kwazvo nekuti ndakazvida pandakaiverenga kumashure kwezuva. Saka kupedza June, ndinowana yangu kudzokorora wega kuitira kuti chero munhu achiri asingazive zita iri remunyori wechiFrench anokwanisa kuzviwana nekunakirwa nazvo. Nekuti hongu, kune humwe hupenyu shure Camille Verhoeven.
2 Ndokuona kumusoro uko
4 Chii chinovabatanidza
7 Iyo bhaisikopo
Akazvarwa muParis muna 1951, Pierre Lemaitre ndomumwe wevakanyanya vanyori vane mukurumbira uye vanozivikanwa veFrance yemakore ekupedzisira. Pasi rese anozivikanwa uye achiwana budiriro hurusa nemupurisa iyeye mudiki saiye akakura muhungwaru uye nenyaya dzinotyisa dzaari. Camille Verhoeven (Irene, Alex, Rosy naJohn y Camille), ndiye munyori wemamwe mazita akadai seanokambaira Nguo yemuchato, Mazuva matatu uye hupenyu o Zviwanikwa zvisina hunhu.
Ndokuona kumusoro uko
Muna 1914, nguva pfupi asati apfurwa nekuda kwekupandukira, kunyangwe akagadziriswa Gare gare, musoja weFrance Jean Blanchard akanyora kuti: «Ndinokupa musangano kudenga, kwandinovimba kuti Mwari vanotiunganidza. Ndokuona kumusoro uko, mudzimai wangu anodikanwa… ». Uye munyori wenyaya ino, Pierre Lemaitre, anomutenda pakupedzisira nekukwereta mutsara wezita racho, sekupa kwaakaita bhuku iri kumauto emarudzi ese akawira muHondo Yenyika Yekutanga. Izvo zvakakosha mairi zvakare mutero, akafananidzwa mune mamwe matatu ma protagonist mauto, vatambi vatatu imwe neimwe isingakanganwike uye nehupfumi hwakasiyana.
Unosara uine chishuwo chekuti zvainge zvaenderera mberi, kwete chete yekuenderera uchiperekedza ma protagonists (kunyanya anofamba Albert Maillard), asi nekusarega kunakirwa nekuyemura chimiro chemvura, izere nehunyanzvi uye nhaurirano dzakanaka kwazvo, uye inguva dzesreal dzinorondedzerwa nekuseka uye nekushamisira kunoshamisa. Muchokwadi, pazviitiko zvakawanda haugone kudzivirira kunyemwerera kwekuziva, kusetsa kana kunakidzwa pakati pemutambo uzere iwo.
Chiitiko chakaipisisa mushure mekuparadza Hondo Huru, avo vakaurayiwa - kunze kwevanhuwo zvavo - vaivewo mazhinji evarwi vakapona, sevaya vakaurayiwa muhondo vakava magamba. Ivo vanonyanya kutaurwa vatatu vevaya varipo masoja.
Lieutenant D'Aulnay-Pradelle Icho chinhu chekutarisira kuti munyori anototaridza pachena kwauri sediki, anonyengera, anonyengera uye anoda chinzvimbo pasina kuyerwa kana kupokana. Iye chitsotsi asina imwe sarudzo asi kukuda nekuti iwe unoziva kuti zvichazoguma zvakashata, iyo mhombwe yakadaro haigoni kuenda isina kurangwa kunyangwe kubva paruoko rwevasingafungire vanyori. Kutanga, mazuva mana pamberi pemauto muna 1918, uye kuhwina menduru irikushaikwa, akaraira manejimendi asina basa uye asina musoro kuti varume vake vatore danho remunda.
Kune izvi haazeze kuuraya vaviri kubva kumashure uye enderera nevamwe vaviri kutora mukana wekudonha kwegobvu. Mumwe anosundidzirwa mugomba uye anovigwa ari mupenyu paanoputika. Mumwe musoja, akakuvara zvakaipisisa mugumbo uye akashatiswa zvisingaite nechipwanya chakabvarura shaya yake yepazasi, anokwanisa kumununura uye kuponesa hupenyu hwake. Kubva ipapo, hukama pakati pavo huchave hwehukama hwakasiyana uye hwakakura.
Albert, iye akanunurwa, achazvipira iye zvakakwana kune anomununura, Edouard Pericourt, nekuzviramba kusinganeti, kuzvipira uye kuonga kusingaperi kwechikwereti chehupenyu chauinacho naye. Hushamwari ihwohwo huchavabatsira kubata nekushungurudzika kwekuona zvavakave mushure mekurasikirwa neganda ravo muhondo. Uye chii chakavashandura kuva nzanga, mune izvo kuchine kushushikana kumwe chete, hunyengeri, kupesana kweboka, shanje, vavariro uye kusazvibata, kunyangwe mweya wekuvandudza, hushingi netariro, kutenda, kuvimba uye kunyengera.
Kupfuura zvese, ivo vakasiyana zvachose. Albert anobva kuzvininipisa, anotya, Mbwende, kutya uye kuzara nekusachengeteka, asi anowedzera mutsa netsitsi zvisina muganho uye achaita chero zvodii shamwari yake Edouard, kunyangwe pavaive kumberi vaisatombozivana. Iyi rondedzero inogara ichiperekedzwa nematauriro anonakidza aamai vatisina kumboona, asi kubva kwavari vatinoverenga pfungwa dzavo nezvehunhu husina kusimba hwemwanakomana wavo uyo, zvakadaro, anogona kunge ari akashinga pane vese vanhu.
Edouard anobva kumhuri yakapfuma, mwanakomana webhanga rakabudirira ane hukama hwakasimba muhurumende uye waaigara achivengana naye nekuda kwekusanzwisisa kwake uye nekuzvidza hunhu hwake hwekupanduka, kupenga, kurota uye eccentric. Nekudaro, iye zvakare ane hanzvadzi inomuda. Ndiye muimbi ane chipo chakakosha chekudhirowa, asi ane mweya wakakuvadzwa zvakadzama nekunzwisisa kwaanoita uye, pakupedzisira, akatsamwa zvikuru nemarwadzo uye kupindwa muropa kuti arwe nayo.
Iyo poindi ndeyekuti Edouard haadi kuziva chero chinhu nezvemhuri yake uye kunyangwe zvishoma kuti adzoke navo., zvakawanda kuna baba vake pane zveronda rakaipisisa rakamusiya asina kumeso uye kuti haadi kuzvigadzirisa. Albert haambozvinzwisisa, asi anozozvitambira nekumuchengeta, kutanga muchipatara chemunda uyezve kuita kuti aendeswe kuParis achizivikanwa nemusoja akaurayiwa mukutanga kwekunyengera nemhosva dzavachaita.
Hupenyu hwaAlbert, kubvira ipapo, huchave huchipfuurira husina simba hwekunzwa uye tsinga kuti vachatoda kumumisa iye Edouard, uyo akapindwa muropa kutanga morphine uye gare gare ku heroin uye asingambosiya imba inosiririsa yavanogovana, idee chitsotsi chiri nyore sezvachakakura. Vese vanotora mukana wehupenyu hwekushingairira, kuda nyika kunowedzerwa nekukunda uye kurwara kwekusaziva (uye zvakare vane mhosva) yezviremera kukudza magamba avo ehondo nekupa makwikwi ezvivakwa mundangariro yavo. Mumwe wevaya vachawa nekuda kwekubiridzira achave baba vake chaivo.
Panguva imwecheteyo, Lieutenant Pradelle, uyo aivewo neupfumi mavambo asi akasara kumashure, awana zvaaida: mukurumbira uye hupfumi hwakawedzerwa newanano yake ku Madeleine Pericourt, hanzvadzi yaEdouard, nekuda kwemamiriro ekumutenda akafa asi achida kumuwana nekumuviga mupanthe yemhuri yake. Madeleine achasanganawo naAlbert, achave ari mudambudziko guru nekuti ndiye iye, pakukumbira kwaEdouard, akavazivisa nezvekufa kwake kunofungidzirwa.
Pradelle ari pamusoro pekambani inotarisira kutsvaga, kufumura uye kuendesa kwemauto yakawira pamatanho akasiyana kumakuva uye matsva necropolises akavakirwa izvi chinangwa. Asi, semunhu anonyangadza chaiye, nzira dzake ndidzo dzakaipisisa uye dzisina hunhu dzingafungidzirwe, zvichitungamira kunjodzi inotonyanya kurwadza: yekurasikirwa nemitumbi kana kugerwa kwavo kuiisa mumabhokisi madiki kuchengetedza mari, kuvhiringidzika mumazita kana kungofambisa mabhokisi asina chinhu kana akazara tsvina.
Ichashandisa vashoma vasingakwanise, vashoma uye vasingagoni kuverenga nekunyorwa kwevakuru ndinotenda hukama hwakanaka hwatezvara vake. Uyu, zvakadaro, akazviwana zvakanaka kekutanga uye anoziva chaizvo kuti rudzii rwemhirizhonga iye. Pradelle achaenda kunorambidza pasina chirango kusvikira amhanyira kune grey gavhuna, anozvidzwa nevose nekuvimbika, anozvinhuwidza ipapo uye anopedzisira aburitsa chirevo chinokuvadza icho chichafumura yakaipa mukurumbira.
Mamiriro ezvinhu akasiyanasiyana evatambi vese akapindirana nekuda kwe chimiro chakabudirira uye ine mutinhimira wakanaka kwazvo muchirevo, uko kunyongana kukuru uye kuri kugara kuri kwekuona kana Albert naEdouard vachizobudirira mukunyepedzera (uye dai vasina kuvawana). Zvakare kana mhuri yaEdouard ichazoziva kuti mwanakomana wavo mupenyu, kunyanya apo Albert anopedzisira ave nehukama navo, achishandira baba vake uye achidanana nemumwe wevarandakadzi mumba make, uye, sezvandambotaura, kana Pradelle ari kupihwa muenzaniso wakanaka.
Kuguma kunogona kunge kuri iko chete kunokwanisika uye kune epilogue inopedzisa kubva pamipendero uye ichisiya nzira dzakashama kune vamwe vatambi vechipiri vakaonekwa, vakadai semwanasikana mudiki wechirikadzi yemuroja wemba iyo Albert naEdouard vanogara, uye anovandudza navo hushamwari hwakakosha sekufamba, kunyanya, naEdouard.
iko kunzwa paunenge wapedza ndiko kwekuverenga inoverengeka yakanaka, haina nhoroondo, yakaita sehondo kana picaresque, asi nezvose panguva imwe chete uye zvakanyanya kunyorwa. Iyo inofadza, inofamba, inonakidza uye inyengeri. Iwe haugone kukumbira zvimwe. Usazeze kuzviwana.
Yakasarudzwa ye13 César Awards uye anokunda mashanu, inotungamirwa nemutambi uye director Albert Dupontel uye nyeredzi dzeBuenos Aires nyeredzi naNahuel Perez Biscayart, pakati pevamwe. Nekubata kwe El phantom yeiyo opera o Moulin Rouge, iyo firimu inofamba pakati pemitambo yemitambo uye surrealism.
Kujekesa dhizaini yekugadzira uye zvipfeko, zvine kuzivikanwa kwakakosha kwebasa reumhizha re Cecile Kretschmar, izvo zvakagadzira zvinopfuura 20 masiki inoshandiswa nemutambi mukuru. Ndinovimba mutero wakanaka. Tichaona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Ndokuona kumusoro uko, naPierre Lemaitre, pa cinema. Ongororo yangu.